Manafoana ny fifanarahana Open Sky miaraka Etazonia i Samoa
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manafoana ny fifanarahana Open Sky miaraka Etazonia i Samoa
Nofoanan'ny Governemanta Samoa ny fifanarahana lanitra misokatra amin'ny firenena marobe izay manomboka amin'ny Jolay. Ny departemanta amerikana misahana ny fitaterana dia nampandre ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikanina mitazona ny taratasy fanamarinam-pahefana hanompo an'i Samoa eo ambanin'ny lanitra misokatra.
Araka ny tatitra, ny Talofa Airways Limited monina any Samoa dia nangataka fankatoavana 'fanafahana vonjy maika' avy amin'ny USDOT, hamela ny mpitatitra azy hiasa sy hivoaka an'i Samoa Amerikanina satria nikasa ny hiala ny governemanta Samoa tamin'ny 9 martsath avy amin'ny Fifanarahana marobe momba ny fanalalahana ny fitaterana an'habakabaka iraisampirenena (MALIAT). Etazonia sy Samoa dia samy antoko ao anatin'ity fifanarahana ity.
Ny masoivoho federaly dia namoaka fampandrenesana nasionaly milaza fa tamin'ny 9 martsa lasa teo dia nisintona ny antoko samoana ho antoko avy amin'ny MALIAT, ary namarana ny fifanarahana tany an-danitra tamin'i Etazonia. Nampahafantarina an'i Etazonia izany tamin'ny alàlan'ny fantsona diplomatika tamin'ny 9 martsa 2018. Brian J. Hedberg, talen'ny USDOT's Office of International Aviation dia nilaza fa nanjary manan-kery tamin'ny 9 martsa 2019, herintaona taty aoriana, ny fisintahana. Nilaza i Hedberg fa nampandrenesina ireo mpitatitra amerikanina fa tsy hisy vokany 120 andro intsony ny taratasy fanamarinana manomboka amin'ny datin'ny fampandrenesana. "Ny USDOT dia manasa ireo mpitatitra amerikana hametraka fangatahana fangatahana fanalalahana araka ny lalàna federaly mba hanomezana fitaterana an'habakabaka vahiny any Samoa miorina amin'ny hatsaran-tarehy sy ny valiny."
Ny MGM Resorts International dia nahazo ny fanitarana ny sub-Concession an'ny Macau Gaming hatramin'ny volana Jona 2022
Fanafihana mpampihorohoro roa heny any Nouvelle Zélande: “Misy rà hatraiza hatraiza”
Brand USA mikasa ny hanao dia iraisam-pirenena mankany Etazonia